Tag: rel ugc
Inona avy ireo Nofollow, Dofollow, UGC, na rohy misy tohana? Fa maninona no miverina amin'ny laharam-pikarohana ny Backlinks?
Alakamisy, Aprily 1, 2021 Zoma, Aprily 2, 2021 Douglas Karr
Isan'andro ny boaty fampidirana ahy dia tototry ny orinasa SEO spamming izay mangataka ny hametraka rohy ao amin'ny atiny. Rano fangatahana tsy misy farany izany ary tena mahasosotra ahy. Toy izao no fandehan'ny mailaka… Malala Martech Zone, Tsikaritro fa ianao no nanoratra an'ity lahatsoratra mahavariana ity amin'ny [teny lakile]. Nanoratra lahatsoratra amin'ny antsipiriany momba izany koa izahay. Mieritreritra aho fa hanisy fanampiny tsara ho an'ny lahatsoratranao. Azafady mba ampahafantaro ahy raha ianao